Munaasabad xariga lagaga jarayey dallad cusub oo midaysa iskuulada oo lagu qabtay Buuhoodle. – Radio Daljir
Munaasabad xariga lagaga jarayey dallad cusub oo midaysa iskuulada oo lagu qabtay Buuhoodle.
Nofeembar 30, 2009 12:00 b 0
Buuhoodle, Nov 30 – Munaasabad balaadhan oo xariga lagaga jarayey dallad Cudub oo ay ku midoobeen in ka badan 20 iskuul oo waxbarashada dadban ah ayaaa lagu qabtay magaalada Buuhoodle, gobolka Cayn.
Munaasibadan oo ay soo qabanqaabiyeen mas’uuliyiinta iyo xubnaha dallada cusub ee HIMILO oo ay ku midaysan yihiin inta badan iskuulada waxbrashada dadban (Non-formal Education) ee gobolka Cayn ayaa waxaa ka soo xaadiray qaybaha kala gedisan ee bulshada gobolka Cayn sida Ururada Bulshada, Aqoonyahano, Isimo, Cuqaal, Maamulka Gobolka, bahda waxbarashada, iyo dhamaan qayabaha kala duwan ee bulshada Buuhoodle.
Ugu horayn waxaa munaasabada daahfuray Isuduwaha Dallada HIMILO Yuusuf Faarax Cismaan oo warbixin kooban ka bixiyey ujeedka iyo yoolka ay hiigsanayso ee loo dhisay dalladan HIMILO.
Waxaa uu tilmaamay in dalladani ay wax badan ka bedelayso xaalada waxbarshada dadban ee goblka Cayn.
Sidoo kale, waa hadalka lagu soo dhaweeyey gudomiye ku xigeenka dalladan HIMILO marwo Amaal Faarax Nadiif oo hadal kooban halkaasi kasoo jeedisey, bulshada gobolka Cayn-na ugu baaqday in ay taageeraan dallada HIMILO ee ay ku midoobeen iskuulada waxbarashada dadban ee gobolka Cayn.
Waxaa sidoo kale, hadalka lagu soo dhaweeyey isuduwaha waxbarashada gobolka Cayn Cabdikariin Maxamed Cilmi (Cabdiweyne) oo isna tilmaamay in uu soo dhaweynayo cid kasta oo waxqabad la timaada, hase yeeshee wuxuu sheegay in ay is-diiwaan geliyaan cidii doonaysa in ay soo kordhiso waxbarasho cusub, taasoo uu tilmaamay in ay tahay horumarka gobolka.
Md. Cabdiweyne ayaa sidoo kale u balanqaaday dalladan HIMILO in uu siinayo agabkii ay wax ku dhigi lahaayeen ilaa sanadka 2010 ka ee fooda inago soo haya.
Waxaa hadalka qaatay Gudooomiye Ku xigeenka gobolka Cayn Maxamuud Sh. Cumar Xasan oo aad u soo dhaweeyey dallada HIMILO, kuna booriyey in ay sii wadaaan dedaalkooda.
Si kastay ahaataba, munaasabadan xariga looga jarayey dallada HIMILO ee ay ku midoobeen waxbarashada dadban ee gobolka Cayn, ayaa ku dhamaatay jawi wanaagsan, waana tii ugu horeysey ee nooceeda ah ee ay samaysataan iskuulada waxbarashada dadban ee gobolka Cayn.
Khadar Cawl Ismaaciil,
Maalinta HIV/AIDS oo maanta laga xusay Puntland & munaasabad lagu qabtay Buuhoodle.